Akukho namnye nguAlicia Keys - Izinto Zobugcisa
Akukho namnye nguAlicia Keys
Oku kwabhalwa ngokudibeneyo kwaye kwaveliswa ngu-Alicia Keys 'u-rapper umfana uKerry' Krucial 'Abazalwana. Abazalwana babenegalelo kumaqhosha amabini ealbhamu zangaphambili.
Kutshiwo amaqhosha Ibhilibhodi Le yayiyingoma enye eyazibhalayo: 'Iingoma ezininzi azenzekanga ngoluhlobo. Yayenye yeengoma zokugqibela endizibhalileyo. Ndidinga ukuyithetha lento. Inamandla apheleleyo, yeklasikhi kodwa ineediliya, iyanqwenela kodwa yoyisa. Ndifuna abantu bave umphefumlo wam. '
Amaqhosha azaliswe kwi-MTV Canada ngentsingiselo yengoma: '' Akukho mntu 'uthetha nyani ngendlela yobudlelwane, izinto ezininzi zikungqongile ngalo lonke ixesha ukuzama ukukuphazamisa. Kwaye nangona abantu bengathetha kwaye bathethe nantoni na abanokufuna ukuyithetha, kodwa ke akukho mntu unokungena kule nto. '
I-albhamu inesihloko Njengam UNks. Keys uxelele i INew York Times Nge-9 kaSeptemba 2007, kuba ukhule ngakumbi ngokuthe ngqo kule minyaka idlulileyo. 'Ndibe ngumntu ofihlakeleyo,' utshilo. Ndiza kuhlala ndizama ukugcina yonke into ide icekeceke kwaye ipholile kwaye ilungelelanise yonke into. Isigqumathelo sasisoyikisa kakhulu. Kwaye khange ndiyithande. '
Oku kugcine irekhodi lika-Alicia Keys lokuba ne-American Hot 100 # 1 qho kwiminyaka emithathu. Ngo-2001 wabetha phezulu ngo'Fallin. ' 'UBoo wam' wafikelela kwindibano ngo-2004 kwaye kwathiwa 'Akukho namnye' waba ngumculi we-R & B waseMelika kwi-chart yesithathu ngo-2007.
Le ngoma inezinto ezithile zokuvavanya. Keys uxelele Imeyile yemihla ngemihla Nge-14 kaDisemba ngo-2007: 'Ndisabhala uninzi lweengoma zam kwipiyano, kodwa bendiphambanisa esitudiyo. Ndidlale iMellotron, ilungu leWurlitzer kunye nokusetyenziswa kweziphumo.
Ngomhla kaDisemba 29, 2007 ishati yeR & B / yeHip-Hop eshushu, le ngoma yayingu- # 1 kwaye ilandelwa 'Njengokuba ngekhe uphinde undibone' yayingu- # 2. Oku kuthetha ukuba amaqhosha aba ngumculi wokuqala ukubamba izikhundla eziphezulu kwitshathi kwiveki enye ngaphandle koncedo lwendwendwe okanye amagcisa afakiweyo. Ngaphambili abanye abaculi abali-8 bebekade beku- # 1 kunye no-2 ngaxeshanye, kodwa kwimeko nganye babenoncedo oluvela kumaqabane ama-duet okanye amagcisa afakiweyo, okanye yayingabazobi ngokwabo.
Izitshixo zenze oku noJohn Mayer kumabhaso eGrammy ka-2008, apho yaphumelela kwiNgoma yeR & B eNgcono kunye neNtsebenzo yeVidiyo yoBuchule yeR & B.
Le yayiyeyona nto ibalulekileyo eYurophu, yaba yi-Keys yokuqala # 1 kwitshathi ye-Euro 200. Ukongeza ifikelele kwindibano yeetshathi ezingatshatanga eBulgaria, eCroatia, eCyprus, eHungary, ePortugal, eSpain, eSwitzerland naseTurkey. Ingoma ikwangamaQhosha okuqala phezulu kwiTshathi yeHlabathi yeZizwe eziManyeneyo.
Ividiyo yomculo yengoma yayiyeyona # 1 ikliphu ebonwa kakhulu kuYahoo! Indawo yoMculo ngo-2008.
Le yayiyeyona ngoma imamelweyo e-US ngo-2008, kuqikelelwa ukuba abaphulaphuli abayi-3.08 yezigidi bayiva le ngoma kunomathotholo, umndilili wamaxesha ali-10 kubemi bonke baseMelika. UFlo Rida 'ophantsi' wayengowesibini kunye nabaphulaphuli abayi-3.02 yezigidigidi kunye noLeona Lewis '' Ukopha uthando 'ubekwe kwindawo yesithathu nge-2.75 yezigidigidi.
Njengam Yeyona albhamu yayithengisa kakhulu eMelika ngo-2008. Iseti kaJis Groban yeKrisimesi ka -07 UNoel yeza okwesibini kunye nekaLil Wayne UCarter III Isithathu.
Le ngoma yabuyela e-UK yatshata itshathi ngoMeyi 2009 emva kokuba yenziwe Italente yaseBritane ngo-Natalie Okri oneminyaka elishumi ubudala okhuphisana naye.
Ukucinga ngengoma ku Ukuzonwabisa ngeveki kudliwanondlebe luka-2012, uKeys wathi uyakholelwa ukuba iphefumlelwe nguThixo: `` 'Akukho namnye' owayenjalo, ngqo evela kuThixo, utshilo. 'Ivele ezulwini yaza yawela ethangeni lam. Andazi ukuba ndingayichaza njani ngcono kunaleyo. Andinakuze ndilibale, besele sikhethe omnye [umntu] ongatshatanga, kodwa ndibize wonke umntu- i-A & R yam, umphathi wam- kwaye bendifana, 'Ndicinga ukuba iza kwehla.' Kwakungenakuphikwa. Uyazi nje. Ndiyayithanda ngentliziyo yam yonke, kwaye ngalo lonke ixesha ndiyicula, iyandikhulula kwakhona. ''
UAretha Franklin wayigubungela le albhamu yakhe ka-2014, UAretha Franklin Ucula i-Great Diva Classics , Ukuyilungisa ngeCaribbean vibe. Umlingane wexesha elide kunye nomvelisi wecwecwe uClive Davis uthe kwitheko lokumamela i-albhamu yayizizitshixo ezacebisa ukuba incasa kwasekuqaleni. 'Kuba ndidla isidlo sasemini noAlicia qho kwiinyanga ezininzi,' ucacisile, 'ndaye ndaxoxa malunga noko, kwaye wathi,' Ukuba uyazi ntoni, ndiva nje incasa yeCaribbean, reggae.
xa ubusuku bube lilolo
Ingelosi inombolo 555 uthando
Akukho mntu waziyo ukuba kunjani
molo ndim okhangela iingoma